FBC - Nageenya baha Afrikaaf Ityoophiyaan hojjechaa jirti- obbo Haaylamaariyaam
Nageenya baha Afrikaaf Ityoophiyaan hojjechaa jirti- obbo Haaylamaariyaam
Finfinnee, Amajjii 4,2009(FBC) - Dhimma nageenyaa baha Afrikaa cimsuuf IGAD akka cimu Ityoophiyaan hojjechaa akka jirtu muummichi ministiraa Haaylamaariyaam Dassaalany ibsan.
Ityoophiyaan Sudaanii fi Keeniyaa waliinis hariiroo gaarii qabdi jedhan muummichi ministiraa Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataatti ibsa har’a laataniin.
Rakkoon biyyoota ollaa Somaaliyaa fi Sudaan akka hiikkatu hojjechaas turteetti. Baha Afrikaatti hariiroo waliinii cimsuun, faayidaa waliiniif hojjetamaa akka jiru muummeen ministiraa mana marichaaf ibsaniiru.
Jibuutii waliin hariiroon jiru sadarkaa hidhata diinagdee uumuurra akka ga'e kan himan obbo Haaylamaariyaam, kana galmaan ga'uufis waliigalteen mallatteeffamuu himaniiru.
Ityoophiyaan Somaaliyaan nagaa fi tasgabbiin biyya taatee akka itti fuftu AMISOM jalattis ta’e kobaa deeggarsa laachaa jirti.
Kanaafi filannoon gaggeeffamus bilisaan dhiibbaa tokko malee akka gaggeeffamu Ityoophiyaan hojjechaa kan turte jedhan obbo Haaylamaariyaam.
Gamtaa Awrooppaa, Gamtaa Afrikaa fi IGAD waliinis Ityoophiyaan caalman hojjechaa jirti. Hariiron ijaarrames cimaadha jedhaniiru.
Bu’uuraalee misoomatiinis walitti hidhamuuf Soomaaliyaa waliin hojjetamaa akka jiru muummichi ministiraa walga'ii idilee mana maree 12ffaarratti gaaffii miseensotarraa dhiyaataniif yammuu deebisan ibsaniiru.
Rakkoo Sudaan Kibbaa fooyyessuuf hojjetamaa turus Ganna darbe walitti bu’iinsa cimaa uumamee tureen nageenyichi boora’eera. Sana hiikuufis garuu mariin gaggeeffamaa jira jedhan muummichi ministiraa.
Oduuwwan Biroo « Muummichi ministiraa mana mareetti argamuun gaaffilee dhiyaataniif deebii laatan	Labsiin yeroo hataattamaa fageessee yaaduu mootummaa muul’isa jedhame »